Which plug adaptor do I need when travelling from Anguilla to Zimbabwe? - WhichPlug.com
Which plug adaptor do I need when travelling from Anguilla to Zimbabwe?
The table below summarises the plug types, voltage and frequency of electrical current in both Anguilla and Zimbabwe.
The voltages found in Anguilla and Zimbabwe are significantly different.
The frequency of electrical current found in Anguilla (60Hz) differs to that found in Zimbabwe (50Hz).